WTO မှပြစ်တင်ရှုတ်ချသော Trump မှတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်အခွန်များကို - teles relay
Trump အုပ်ချုပ်မှုကတရုတ်အပေါ်ချမှတ်ထားသောအပြစ်ပေးသည့်အခွန်အခများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟု WTO ကအင်္ဂါနေ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှကျွမ်းကျင်သူများသည်ဤကိစ္စကိုပေကျင်း၏တောင်းဆိုချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ရှိသည် "ပြissueနာမှာအစီအမံသဟဇာတဖြစ်ကြသည်" GATT (WTO ၏ဘိုးဘေး) ၏ဆောင်းပါးအမျိုးမျိုး၊ "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက၎င်း၏အစီအမံများနှင့်၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီကိုက်ညီစေရန်အကြံပြုသည်".
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဘေဂျင်းမှ WTO သို့ယူဆောင်လာသည့်ဤအမှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၅၀ ခန့်တန်သောအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအခွန်အကောက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအပြစ်ပေးအကောက်ခွန်နှစ်ခုစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများအကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏အစမှတ်နှင့် Trump သမ္မတ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဝါရှင်တန်နှင့်ပေကျင်းတို့သည်ကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။
၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင်, panel ကထပ်မံအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်မှီခိုအားထားခဲ့ရသည့် 'ကောင်းမှုနှင့်ဆိုးညစ်သောစံနှုန်းများ' ကိုကာကွယ်ရန်အစီအမံများလိုအပ်ကြောင်းအခိုင်အမာထောက်ခံချက်အတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ရှင်းပြချက်များမပေးနိုင်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအများပြည်သူကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆက်စပ်သော ".
ပါတီနှစ်ခုအားယခု WTO သို့အယူခံဝင်နိုင်သည်။ သို့သော် ၀ ါရှင်တန်မှတရားသူကြီးများခန့်အပ်ခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသောဂျီနီဗာအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်း၏အယူခံအဖွဲ့သည်တရားသူကြီးများမရှိခြင်းကြောင့်ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ စတင်၍ လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ လုံလောက်သောနံပါတ်။
Oops - Video အရ Celine Dion သည် Pepe Munoz နှင့်အတူသွားသည်